Sujet type 11 Malagasy - Baccalauréat série A-C-D - Informations et Actualités sur Madagascar
Education Sujet type 11 Malagasy - Baccalauréat série A-C-D
Sujet type 11 Malagasy - Baccalauréat série A-C-D
by Alpha world on 14 h 35 in Education
LAZA ADINA I: (Isa 6)
1) Milazà tara-kevitra roa iombonanan’ny asa soratr’i J.J. RABEARIVELO sy Samuel RATANY.
2) Hazavao anatin’ny andalana tsy mihoatra ny dimy fa mpiantoka ny velona ny razana
LAZA ADINA II: Isafidianana A sy B (Isa 14)
Hoy ny mpandinika iray: tsy ilaina ny literatiora, satria ny onjan’ny nofinofy voiziny dia misavina mpandrendrikany lakan’ny fampandrosoana ny fiaraha-monina. Fakafakao sy tsikerao
(…) Lehilahy efa mba teny amin’ny oniversite ve dia hanao boton’olona? Tsy rariny kosa izany.
Fa ngaha ny maha-lehilahy lehibe teny amin’ny oniversite” ahy hahitako ny hohaniko isan’andro? Ary inona intsony moa izay rariny e? Ny miasa an-trano no mba haiko sy mora hahitana asa.Izay no anjara tratrako.
Marina kanjo ny anao! Tena mampalahelo isika tanora ankehitriny. Mba nianatra ihany. Mba nandanian’ireo ray aman-drenintsika fatotra amam- pondrana ihany… nefa dia izao: tsy an’asa fahiny, rehefa miteny I dada mialohany taom-pianarana vaovao dia hoe: mianara tsara ! Tsy mba manan-kolovana afa-tsy ny fahaizana ianareo.
Mianara dia ho tafita! Ankehitriny anefa toa izay nianatra indray no rendrika. (…….)
Izany anie no ilazako hoe: Tsy hitako intsony izay rariny! Raha ny fikirizako fahiny ry menja, tsy haniry izay ho mpiasa an-trano mihitsy aho!tsy izany velively ny tanjoko (…..) saingy resy e! Ny hahita izay sitrany ahay vaza-mihetsika sisa (……)
By Alpha world at 14 h 35